भरतपुर महानगरपालिकाले गर्यो तीस करोड बढी आन्तरिक आम्दानी - Nepal's Digital News Paper
बुधबार, अशोज १, २०७६
भरतपुर महानगरपालिकाले गर्यो तीस करोड बढी आन्तरिक आम्दानी
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ २७, २०७६
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को योजना समेटिएको वार्षिक कार्ययोजना किताब सार्वजनिक गरिएको थियो । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा गरेका कामहरूको बारेमा महानगरपालिकाका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुले जानकारी गराएका थिए । महानगर क्षेत्रमा कार्यरत अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुद्वारा कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी दिइएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कूल एक अर्ब १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएकोमा एक अर्ब ४७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी भरतपुर महानगरले गत आवमा कृषि प्रवद्र्धन अन्तर्गत ६५ लाख र दूध उत्पादनमा ३५ लाख गरी कूल एक करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायका अनुसार, साना सिँचाईतर्फ ३० लाख, डीप बोरिङतर्फ १० लाख र बीउविजन आत्मनिर्भरताका लागि २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । दूध उत्पादनतर्फ २५ पैसा प्रतिलिटरका दरले अनुदान दिइएको महानगरले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ५७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेट एक अर्ब २९ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेकोमा ७३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । कुल एक सय ६६ वटा नगरस्तरीय योजना रहेकोमा ४० वटामात्र सम्पन्न भएको भरतपुर महानगरले जनाएको छ ।
धरौटीमा छुटे गृहमन्त्रीका भाइ नरेश, अरु जेल चलान
संसदीय समितिमा सदस्य हेरफेरले कांग्रेसमा तनाव !
प्रधानमन्त्री भन्छन्– चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित पार्ने हैसियत कसैको पुग्दैन
स्वास्थ्यमन्त्रीको डेंगु भाषणपछि सांसद सुजाता परियारको प्रश्न, किन उपकरण अभाव भयो ?
घुस रकमसहित प्रहरी नायब निरीक्षक कार्यकक्षबाटै पक्राउ
१२औं राष्ट्रिय जनगणना: ५४ हजार जनशक्ति करारमा लिने तयारी
प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति देखेर नायिका स्वेता खड्का दंग
दुई हजार कर्मचारीको माग, ५० हजारको आवेदन, कहाँ कतिको आवेदन ?
लोकतन्त्रमाथि खतरा आए सरकार बघिनी शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ: प्रधानमन्त्री ओली
प्रचण्डले गराए दाँतको उपचार